PREMIER LEAGUE: Man City oo labo cad ka dhigtay West Ham +SAWIRRO – Gool FM
PREMIER LEAGUE: Man City oo labo cad ka dhigtay West Ham +SAWIRRO
Byare August 28, 2016
(Manchester) 28 Agoosto 2016.Kooxda Manchester City ayaa garoonkeeda kusoo dhaweysay naadiga West Ham United ciyaar ka tirsan horyaalka Ingiriis-ka oo caawa ka dhacday Etihad Stadium .
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si dar dar ah iyadoo kooxda Man City ay durba qabatay hoggaanka ciyaarta waxaana u dhiibay xiddiga Raheem Sterling daqiiqaddii 7 ’ aad ee ciyaarta isagoo ka dhigay 1-0.
Daqiiqaddii 18’aad ee ciyaarta Sky Blues ayaa la timid goolkii labaad waxaana u dhaliyay xiddiga reer Brazil ee Fernandinho, iyadoo qeybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay 2-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa kooxda West Ham waxa ay la timid gool cajiib ah, waxaanau dhaliyay xiddiga garabka weerarka ee Michail Antonio isagoo rajo u yeelay kooxda West Ham.
Weeraryahanka reer Argentina ee Agüero ayaa kooxdiisa ka qasaariyay fursado wanaagsan kuwaas oo goolal loo filan karay balse xiddiga Raheem Sterling ayaa markale shabaqa soo taabtay isagoo ciyaarta ka dhigay 3-1.
Sikastaba ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 3-1, waxaa kooxda uu hoggaamiyo Guardiola ay iminka leedahay 9 dhibcood iyadoo farqiga goolasha ku hoggaamineyso horyaalka Ingiriis-ka.
TOOS u daawo: AS Monaco vs Paris Saint Germain - LIVE
SERIE A: Inter Milan oo guul gaari la' kulankii labaad...+SAWIRRO